Taliyihii Ciidanka XDS; iyo Wasiirkii gaashaandhigga ayaa xilkii iska casilay, Waa maxay sababtu? | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia - Taliyihii Ciidanka XDS; iyo Wasiirkii gaashaandhigga ayaa xilkii iska casilay, Waa maxay sababtu?
Sarreeye Gaas Maxamed Axmed Jimcaale (Cirfiid);
Taliyihii Ciidanka XDS; iyo Wasiirkii gaashaandhigga ayaa xilkii iska casilay, Waa maxay sababtu?
Sarreeye Gaas Maxamed Axmed Jimcaale (Cirfiid); taliyihii Ciidanka XDS; iyo Wasiirkii gaashaandhigga Cabdirashiid C/llaahi Maxamed ayaa iska casilay xilalkii ay u hayeen xukuumadda Soomaaliya.
Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod; ayaa loo magacaabay xilka Taliyaha ciidanka xoogga dalka
Waa maxay sababtu?
Cabdirashiid C/llaahi Maxamed
Iscasilaadda taliyaha ciidanka ayaa hadal haynteedu waxa ay soosocotay muddo dheer, iyada oo uu jiray muran u dhexeeyey wasiirka gaashaandhigga iyo Taliyaha ciidanka XDS; murankan ayaa ku saabsanaa Wadashaqeynta labadoodad iyo habka ay u wadaagayaan shaqada.
Waxa uu muranku ka billowday qorshaha lagu wajahayo dib u habeynta ciidanka iyo hannaanka bixinta mushaarka ciidanka, oo uu wasiirku doonayey in howsha mushaarbixinta ciidanku marto hab ay wasaaraddu kaalinta ugu weyn leedahay, sida in mushaarka lamarsiiyo habka bangiga, taas oo ay lambaro xisaabeed uga furanayaan ciidanku si shaqsiyaad ah bangiyada, Taliyaha ayaa taas ka soo horjeestay, isaga oo ku dooday in taasi la macno tahay in xogta ciidanku gasho gacmo kale.
Wasiirka iyo Taliyaha ayaa siyaabo kala duwan is khilaafsan uga hadlay dhowr mar oo hore fadhiyo looga hadlayey ciidanka XDS; taas oo muujisay in aanay wadashaqeyn Karin.
Iscasilaadda SG:Maxamed Axmed Jimcaale (Cirfiid); oo hadal haynteedu muddo soo soctay ayaa si kama dambeys ah waxa ay madaxda xukuumaddu uga codsadeen in uu xilka isaga tago oo uu iscasilo, iyada oo sidaas oo kalana wasiirka gaashaandhigga isagana ay noqotay in uu xilka banneeyo mar haddii ay adkaatay wadashaqeyn fiican oo dhexmarta labada mas’uul.
SG: Cirfiid & Cabdirashiid ayaa waxa u yeeray Raisalwasaare Kheyre; ka hor qabsoomiddii shirka golaha wasiirada, iyada oo la isla gartay in ay labaduba xilka banneeyaan si ay raalli ku yihiin.
Sarreeye Gaas Maxamed Axmed Jimcaale (Cirfiid); waxa ay saaxiib yihiin madaxweyne Farmaajo; waxaana lagayaaba in taasi sahashay in aan xilka laga qaadin balse la siiyo fursad oo isagu uga tago xilka iyada oo aan lagu sameyn in shaqada laga eryo, taas oo dhaawici lahayd xiriirka madaxweynaha in Jananka.
Cabdirashiid C/llaahi Maxamed ; wasiirkii gaashaandhigga waxa ay soo wadashaqeeyeen Raisalwasaare Xasan Cali Kheyre, iyaga oo ka soo wadashaqeeyey hay’adda Norwegian Refugee Commission (NRC), sidaas awgeed iscasilaadda labada mas’uul waxa lagayaabaa in ay waxtar u leedahay mustaqbalkooda siyaasadeed.
Sooyaalka wadashaqeyn la’aanta
Labada mas’uul waxa ay si aad u kala duwan uga hadleen weerarkii deegaanka Barriire oo ay ku dhinteen 10; qof oo beeraley ah bishii August ee sanadkan, iyada oo taasi muujisay in ay yartahay wadashaqeynta labadooda.
Maxaa xiga Iscasilaadda labadan Mas’uul?
Waxa la filayaa in madax kale oo ka tirsan xukuumaddu Iscasilaan ama la ruqseeyo maalmaha soosocda, Sababta ugu weyn ee xagga dambe ka riixeysa arrintan waa cadaadiska siyaasadeed iyo kan maamul ee saaran xukuumadda.